Qiimeyn: 3 bil kadib, maxaa ka qabsoomay ballantii Farmaajo ee cadaaladda? - Caasimada Online
Home Maqaalo Qiimeyn: 3 bil kadib, maxaa ka qabsoomay ballantii Farmaajo ee cadaaladda?
3 bil khudbaddaasi taariikhiga ah, Baaritaan la sameyay waxa ka qabsoomay ballan-qaadka madaxweyne Farmaajo ee mudadaasi, innaga oo la xiriirnay maamul goboleedyada dalka, hey’adaha kala duwan ee garsoorka, xafiisyada dowladda federaalka ah, wasaaradda cadaaladda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare si ay uga jawaabaan waxa ballanta ka qabsoomay.
Ugu Horeyntii , Wasiirka Cadaaladda Avv. Xasan Xuseen Xaaji waxaa uu sheegay gaarsiiyay waxqabadka xukuumadda ee arrimaha garsoorka 90-kii maalmood ee la soo dhaafay isaga oo sheegay in ay qabteen “Afar iyo Toban (14) sharci: “Sideed (8) sharci”, Labo (2) Wasaaradda Cadaaladdu dib-u-eegis ku sameysay, kaddibna u gudbisay Golaha Wasiiradda lana ansixyey iyo Lix (6) Wasaaradda Cadaaladda kasoo gaaray Wasaaradaha kale ee Xukuumadda, markii waajibka uga aaddan Wasaaradda Cadaaladdu ka qabatayna loo-celiyey Wasaaradihii ay kasoo kala gaareen.
Koonfur Galbeed: Maaamul Goboleed, waxaa ay soo gaasriiyay warbixin sheegeysa in uu u dhisan yahay garsoorka maamulka sida Makamad sare , oo ah mid a ugu sareysa ee Koonfur galbeed, sadex maxkamadood oo ah heerka racfaanka ah sida maxkamadda Racfaanka gobolka shabeelha hoose, maxkamadda racfaanka Bakool maxkamadda racfaanka Bay. Iyo sidoo kale Maxkamadaha Baydhabo, Buur-hakabo, Xudur, Wanla-weyn, Afgooye iyo Baraawe….Dhammaan garsoorkaas la sheegayo waa mid aananan shaqeyn oo magac u yaal ah!!